You are at:Home»Headline»ချင်းပြည်နယ် ၁၀တန်း စာမေးပွဲ အောင်ချက် တိုးလာပေမဲ့ တပြည်လုံးတွင် အောင်ချက် အနိမ့်ဆုံးဖြစ်
By admin on	 June 10, 2013 Headline
အမှတ် (၂) ပညာရေးဦးစီးဌာန လက်အောက် ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ခုနှစ် ပညာသင်နှစ်တွင် ချင်းပြည်နယ် မှ ၁၆. ၅၂ ရာခိုင်နှုန်း ( (၁၂၃၂ ဦး ) ၁၀ တန်းအောင်မြင်သော်လည်း တပြည်လုံး တွင် အောင်ချက် အနိမ့်ဆုံးဖြစ်နေသည်ဟု သိရ သည်။
ဇွန်လ (၈) ရက်နေ့ တွင် ကြေညာခဲ့သော ၂၀၁၃ခုနှစ် တက္ကသိုလ် ၀င်အောင်စာရင်းတွင် မွန်ပြည် နယ်သည် အောင်ချက် ၄၇.၃၈ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ပထမ နေရာရရှိပြီး ကချင်ပြည် နယ် ၄၃.၇၉ ရာခိုင်နှုန်း ဖြင့် ဒုတိယနေရာ ရရှိကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဆင်းရဲဆုံးပြည် နယ်ဖြစ်သည့် ချင်းပြည်နယ်သည် အောင်ချက် ၁၆.၅၂ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အနိမ့်ဆုံးဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။
၁၀ တန်းအောင်ချက်တွင် ချင်းပြည်နယ်တခုလုံး ၁၀ တန်း အောင်မြင်သူများအနက် ၅ ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် ၁ ဦး၊ ၄ ဘာသာ နှင့် ၃ ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် ၅ ဦးစီ၊ ၂ ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် ၂၄ ဦး နှင့် ၁ ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် ၁၁၄ ဦးရှိကြောင်း သိရ သည်။
မြို့နယ်အလိုက် အောင်ချက်အကောင်းဆုံးမှာ တီးတိန်စာစစ်ဌာန ( ၂၄. ၁၇ ရာခိုင်နှုန်း)၊ ဒုတိယ မင်းတပ်စာစစ်ဌာန ( ၂၁.၉၀ ရာနှုန်း)၊ တတိယ ဖလမ်းစာစစ်ဌာန ( ၂၁.၁၄ ရာနှုန်း) ဖြစ်ပြီး အနိမ့်ဆုံးအဖြစ် ပလက်ဝစာစစ်ဌာန( ၄.၁၀ ရာနှုန်း)၊ ဒုတိယ ထန်တလန်စာစစ်ဌာန ( ၉.၀၅ ရာနှုန်း) နှင့် တတိယ အနိမ့်ဆုံးမှာ မတူပီစာစစ်ဌာန (၁၃. ၅၄ ရာနှုန်း) တို့ဖြစ်သည်။
၂၀၁၁ ချင်းပြည်နယ် တပြည်နယ်လုံးတွင် တက္ကသိုလ် ၀င်စာမေးပွဲဖြေဆိုသူ ၈၀၁၇ ဦးရှိသည့် အနက် ၁၉၅ ဦးသာ အောင်မြင်ကာ တက္ကသိုလ် ၀င်အောင်ချက်မှာ ၁၃.၆၇ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ချင်းပြည်နယ် တပြည်နယ်လုံးတွင် တက္ကသိုလ် ၀င်စာမေးပွဲဖြေဆိုသူ ၇၃၃၂ ဦးရှိသည့် အနက် ၁၀၉၃ ဦးအောင်မြင်ကာ ၁၄.၉၁ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ တပြည်လုံးတွင် တက္ကသိုလ် ၀င်စာမေးပွဲ အောင်ချက် ၃၅.၁၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိ သည့်အနက် မွန်ပြည်နယ် သည် အောင်ချက် ၄၃.၃၃ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ပထမအဆင့် ရရှိခဲ့သည်။
ယခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံ တနိုင်ငံလုံး၏ စာစစ်ဌာန ၁၂၆၉ ခုမှ ကျောင်းသား၊သူပေါင်း ၄၈၇၀၀၀ ဦးက တက္ကသိုလ် ၀င်စာမေး ပွဲဖြေဆိုကြကြောင်း သိရသည်။